London amin'ny mpivady | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Londres, tantaram-pitiavana
Ity vanim-potoana ity dia fotoana tena tsara hitsidihana ny renivohitra anglisy. Ankafizin'ny tanàna ny toetr'andro tsara ary toy ny mahazatra any amin'ireo tanàna misy volondavenona sy rahona matevina amin'ny ankamaroan'ny taona, rehefa miposaka ny masoandro dia mipoitra ny olom-pireneny ary mankafy ny hafanany.
Fitsangatsanganana, fisakafoanana hariva, mandeha mamaky ny valan-javaboary sy trano mimanda, fampirantiana, fety. London dia manolotra zavatra be mandritra ny taona ary raha mandeha mpivady ianao dia afaka mieritreritra sy misafidy sasany indrindra ny hetsika tantaram-pitiavana, an'ireo izay mamela sary tsy hay hadinoina toy ny carte poste romantika. Tsy misy baiko avy amin'ny tsara indrindra ka hatramin'ny ratsy indrindra ao amin'ny lisitray, ka jereo ary amboary ny anao.
2 Venise kely
3 Lalana Columbia
4 Gara St. Pancras
5 Mitaingina soavaly any amin'ny Hyde Park
7 Katedraly St. Paul
8 Sakafo hariva, toast ary sotasota romantika
Ao amin'ny valan-javaboary hyde izy io ary ny olona eo an-toerana dia nankafy ny dia nandritra ny zato taona farafahakeliny. Mpivady maro no tonga eto rehefa asabotsy, ataovy anaty rano ny tongony na mitaingina sambo kely. Ary rehefa tonga ny fotoan'ny dite dia mandeha any amin'ny Lide Café Bar izy ireo.
Izany dia dobo izay tsy mivoha raha tsy amin'ny faran'ny herinandro amin'ny Mey sy fito andro isan-kerinandro amin'ny 1 Jona ka hatramin'ny 12 septambra. Ny latabatra dia misy latabatra eo akaikin'ny kamory mba hahafahanao misotro kafe, dite na divay mena iray vera. Eo akaiky eo no misy ny klioban'ny lomano izay zokiny indrindra any Angletera ary toerana filomanosan'ny olona isan'andro manomboka amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 9 ora sy sasany maraina. Na amin'ny ririnina aza. Ary eny, madio ny rano satria voasedra isan-kerinandro.
Ilay Lido Serpentine sokafy manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva na dia avelany hiditra hatramin'ny 5:30 hariva aza ianao. Misy vidiny 4 pounds isaky ny olon-dehibe na dia aorian'ny 4 hariva aza dia midina hatramin'ny 4 pounds ny saran-dalana. Ny fanofana trano fitsaharana masoandro dia mitentina £ 10 isan'andro. Tonga eo amin'ilay fantsom-pandrosoana nidina tao amin'ny gara South Kensington ianao.
Ho an'ny fitsangatsanganana am-pitiavana sy fisakafoanana antoandro amin'ny masoandro dia tsy maintsy izao no an-tongotra faritra mangina voahodidin'ny lakandrano izay ihetsehan'ny sambo mahafinaritra. Eo amin'ny lakandrano lehibe dia misy kafe sy bara ary trano maro amin'ny fomba fanaingoana Regency. Misy lakandrano lehibe roa, ny Grand Union sy ny Regent ary ny Basin-n'ny Paddington izay nivadika ho dobo lehibe sy tsara tarehy, ny fon'ny faritra iray manontolo, ny Brow Pond.
Ny fiainana eto dia lafo ary milay be fa dia fitsangantsanganana mahafinaritra ary ho an'ny mpivady amin'ny fitiavana, mahafinaritra. Ny fitsangatsanganana dia afaka mandeha lavitra kokoa aza, mamela an'i Little Venice handeha an-tongotra hahatratra ny Regent's Park mandritra ny antsasak'adiny.
Azonao atao ihany koa ny mandray sambo, Waterbus, izay midina amin'ny lakandrano mankany amin'ny zoo ary mankany Camdem. Azonao atao ny mankany any amin'ny metro amin'ny alàlan'ny fidinana ao amin'ny gara Warwick Avenue amin'ny Bakerloo Line.
Raha tsy hijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ianao ary raha mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny mpizaha tany dia hanana trano amin'ny fahafahanao rehetra ianao. Adidy ny miantsena fivarotana ary afaka manararaotra sy mividy voninkazo ho an'ny vadinao koa ianao. Toerana tsara hividianana fehezam-boninkazo ny Tsenan'ny voninkazo any Columbia Road. ihany Mivoha amin'ny Alahady ary any East London izy nefa tonga lafatra raha mandeha eo anelanelan'ny voninkazo.
ihany koa misy fivarotana fahagola, galeriana zavakanto ary fivarotana akanjo sasany manodidina eto ka feno kokoa ny dia. Ao amin'ny Ezra Street, ohatra, afaka mipetraka ao amin'ny cafe mahafinaritra antsoina hoe Lily Vanilly ianao ary manandrana ny mofomamy misy kafe na dite. Mahafinaritra!
Mety manontany tena ianao hoe inona ny tantaram-pitiavana momba ny fiantsonan'ny metro fa misy foana ny zavatra. Eto dia manafina a sary sokitra sivy metatra izay misolo tena ny mpivady mamihina am-pitiavana lehibe. Azo antoka fa hamakivaky ity toby ity ianao indraindray ka rehefa manao izany amin'ny zanakao lahy na vavy ianao dia mijanona ary Raiso ny sary.
Ary satria eo amin'io gara io ianao dia afaka mamita ny fitsidihana ao amin'ny Searcys St. Pancras Champagne Bar. 98 metatra ny halavany, eny, vakianao tsara izany, ary atolotray farafaharatsiny Karazany 17 amin'ity fisotroana fanahy ity.
Mitaingina soavaly any amin'ny Hyde Park
Tsy maninona na mpitaingina tsara ianao na tsia, dia afaka manofa soavaly foana ianao ary manamboatra azy mitaingina soavaly amam-pitiavana mamaky ny iray amin'ireo valan-javaboary malaza any London. Ity serivisy ity dia atolotra eto mandritra ny taona, ho an'ny mpitaingina solo na olon-dehibe na ankizy ary koa ho an'ny vondrona.
Ny serivisy dia manokatra ny varavarany amin'ny 7 ora sy sasany ary mihidy amin'ny 30 hariva, isan'andro amin'ny herinandro. Tsy mila traikefa teo aloha satria milamina be ny soavaly. Raha tianao ilay hevitra dia azonao atao ny manamarina ny toetr'andro alohan'ny sy aorian'ny fanaovana ny famandrihana sy fandoavam-bola an-tserasera na an-tariby. Raha ataonao ela be mialoha dia azonao atao ny manova hatrany amin'ny fampandrenesana herinandro alohan'izay. Tsy averina ny vola, raha tsy izany.
Tsy dia mora ny mitaingina azy satria ny lesona mitaingina isaky ny olon-dehibe 103 pounds isan'ora. Raha mila zavatra manokana ianao, dia mila mandoa 130 pounds. Ny tahan'ny dia misy baoty, satroka ary palitao tsy tantera-drano. Tadidio fa amin'ny faran'ny herinandro dia betsaka ny olona ka tsy maintsy mamandrika mihoatra ny herinandro mialoha ianao.
Iray amin'ireo valan-javaboary izy ary rehefa miakatra an-tampon'ny havoana ianao dia manana fomba fijery mahafinaritra momba an'i Londres. Amin'ny lohataona dia feno voninkazo ilay zaridaina, manana anana, voninkazo dia, orkide, ary raha liana amin'ny tantaran-dranomasina ianao dia misy ny Old Royal Naval College sy ny National Maritime Museum.
Ary tsy lazaiko aminao koa rehefa mamony ny hazo keliny misy voninkazo volomparasy ary latsaka amin'ny làlana sy amin'ny dabilio ny felany. Hatsaran-tarehy izany!
Katedraly St. Paul
Ny fiangonana dia tantaram-pitiavana foana raha ny fikasana dia ny hanana fifandraisana «masina». Ary tena tsara tarehy ity fiangonana manokana ity afaka miakatra amin'ny antsasaky ny fonao hatramin'ny fonao ianao, Dingana 259, ary ny fandinihana an'i Londres dia ataovy izay handaminana ny tananao ...
Mora azo ny katedraly satria manana ny metro misy azy manokana. Manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 8 ora sy sasany ka hatramin'ny 30:4 hariva ary 18 fidirana ny fidirana amin'ilay trano.
Sakafo hariva, toast ary sotasota romantika
Raha tianao ny mandeha any amin'ny bara miaraka amin'ny ankizilahy / zazavavinao dia afaka mitsangatsangana manodidina azy ianao Hotel Connected. Ny barany dia zoro mistery sy mitokana izay ho tianao. Raha anisan'ireo misafidy ianao misakafo miaraka amin'ny fahitana panoramika avy eo ny Searcy's Restaurant ao amin'ny Gherkin no tsara indrindra, miaraka amin'ny dome fitaratra izay manainga ny lanitra sy ny tanàna miboridana.
Tianao ve ny hevitry ny pint amin'ny mahazatra trano fivarotana british? Betsaka ny tolotra nefa any Clerkenwell dia misy ny Fox & Anchor trano fisotroana, miaraka amin'ny menio tsotsotra sy mahavariana, anglisy 100%. Farany, a Dite amin'ny 5 ora Azonao atao ny manandrana azy io any amin'ny toerana rehetra any Londres (ao anatin'ny trano fandraisam-bahiny mahazatra indrindra na koa ny tsara indrindra any Harrod's).
Manontany tena ve ianao hoe avy aiza ny sary izay manomboka ny lahatsoratra? Aiza no miafina izany havoana anglisy tsara tarehy izany? Io ilay Richmond Hill, any avaratry ny Thames meander, manodidina ny Richmond Palace sy ny valan-javaboary mitovy anarana aminy. Ity fomba fijery mahafinaritra ity dia avy amin'ny Terrace Walk, natao tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Londres » London amin'ny mpivady
Tanàna mahafinaritra 20 any Galicia I